यी हुन आईपिएलका पछिल्ला तिन संस्करणमा सर्वाधिक रन बनाउने ५ खेलाडी « Sansar News
यी हुन आईपिएलका पछिल्ला तिन संस्करणमा सर्वाधिक रन बनाउने ५ खेलाडी
६ चैत्र २०७६, बिहीबार १४:३९
६ चैत, काठमाडौँ । आईपिएलका पछिल्ला तिन संस्करणमा सर्वाधिक रन बनाउने ५ खेलाडीहरुका नाम यसप्रकारको रहेको छ :
डिल्ली क्यापिटलर्सका विस्फोट ब्याट्सम्यान रिषभ पंतले आईपिएलका पछिल्ला तिन संस्करणमा सर्वाधिक रन बनाएका छन । उनले आईपिएका पछिल्ला तिन संस्करणमा ४४ खेल खेल्दैँ १५३८ रन बनाएका छन । यस क्रममा उनले १ सतक र १० अर्धसतक समेत बनाएका छन ।
डिल्ली क्यापिटल्र्सकै अर्का खेलाडी शिखर धवन यस सुचिको दोस्रो नम्बरमा रहेका छन । शिखर धवनले आईपिएलका पछिल्ला तिन संस्करणमा ४६ खेल खेल्दैँ १४९७ रन बनाएका छन । यसक्रममा उनले १२ अर्धसतक समेत बनाएका छन ।
३. डेविड वार्नर
सनराइजर्स हैदराबादका कप्तान डेविड वार्नर यस सुचिमा तस्रो नम्बरमा रहेका छन । उनले आईपिएलका पछिल्ला तिन संस्करणमा २६ खेल खेल्दैँ १३३३ रन बनाएका छन जसमा २ सतक र १२ अर्धसतक समेत सामिल रहेको छ । डेविड वार्नरले २०१८ को आईपिएलमा भने खेलेका लिएका थिएन्न ।
रोयल च्यालेन्जर्स बंगलोरका कप्तान विराट कोहली यस सुचिको चौथो नम्बरमा रहेका छन । उनले आईपिएलका पछिल्ला तिन संस्करणमा ३८ खेल खेल्दैँ १३०२ रन बनाएका छन । यसक्रममा उनले १ सतक र १० अर्धसतक समेत बनाएका छन ।
५. सुरेश रैना
मिस्टर आईपिएल समेत भनेर चिनिने चेन्नाई सुपर किंग्सका ब्याट्सम्यान सुरेश रैना यस सुचिको पाँचौ स्थानमा रहेका छन । उनले आईपिएलका पछिल्ला तिन संस्करणमा ४६ खेल खेल्दैँ १२७० रन बनाएका छन जसमा १० अर्धसतक समेत समिल रहेको छ ।